အန်းဒရိုက်စနစ်အတွက် Metatrader 4
Forexတွင် အမြင့်ဆုံးသော အမြတ်ငွေများရရှိဖို့ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးအရောင်းအ၀ယ် အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။
အန်းဒရိုက်စနစ်အတွက် ပြုလုပ်ထားသော MetaTrader4ဆော့ဝဲလ်အသုံးပြုခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ?
အန်းဒရိုက်MetaTrader 4ကို အသုံးပြုပြီး သင့်ကွန်ပျူတာတွင် အကောင့်ဝင်ရောက်သော အချက်အလက်များ ပတ်စ၀က်များကိုပင် သင့်အန်းဒရိုက်ဖုန်း၊ တက်ဗလက်များတွင် ထည့်သွင်းကာ အကောင့်ဝင်ရောက်ရောင်းဝယ်နိုင်ပါသည်။
အန်းဒရိုက်စနစ်အတွက် သီးသန့်ရေးဆွဲထားသော ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်ပါသည်
MT toolများ အားလုံးပါဝင်ခြင်း
အင်ဒီကေတာ အခု၅၀ ပါဝင်ခြင်း
real-time chartပါဝင်ပြီး လိုအပ်သလို ချုံ့၊ ချဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
အန်းဒရိုက်မှာ MTနှင့် ဘယ်လိုရောင်းဝယ်ရမလဲ
အဆင့် ၁: သင့်အန်းဒရိုက်ပစ္စည်းတွင် Google Playကိုဖွင့်ပါ။ သို့မဟုတ် ဆော့ဝဲလ်ကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ။ searchတွင် MetaTrader 4ဟု စာရိုက်ပြီးရှာကာ MetaTrader 4ကိုတွေ့လျှင် ထိုဆော့ဝဲလ်ကို ရွေးလိုက်ပါ။ MetaTrader4ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ဒ်ရယူလိုက်ပါ။.
အဆင့် ၂: ယခုအခါ လက်ရှိအကောင့်ကိုရွေးချယ်ဝင်ရောက်နိုင်သလို ဒီမိုအကောင့် သစ်ကိုလဲ ဖွင့်လိုက်ဖွင့်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအကောင့်ကိုရွေးချယ်ဝင်ရောက်နိုင်ရန် သို့မဟုတ် ဒီမိုအကောင့်သစ်ဖွင့်ရန် ကလစ်နှိပ်လိုက်သည့်အခါ စာမျက်နှာတစ်ခု ပွင့်လာပါလိမ့်မည်။ searchတွင် FBS ဟုစာရိုက်လိုက်ပါ။ ဒီမိုအကောင့်ဖွင့်ချင်ပါက FBS-Demကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အကောင့်စစ်ကိုဝင်ရောက်ချင်ပါက FBS-Realကို နှိပ်လိုက်ပါ။
အဆင့် ၃: အကောင့်အချက်အလက်များနှင့် ပက်စ၀ဒ်ကိုထည့်သွင်းပါ။ အန်းဒရိုက်စနစ်တွင် စတင်ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။